विपी उद्यान जग्गामा बन्न लागेको पार्किङ्गलाई यहाँले कुन रुपमा लिनुहुन्छ ? यस्तो भन्छन् नेताहरु !
भदौ ७, २०७८ बलिराम यादव ,
(प्रदेश समिति सदस्य)
नेकपा माओबादी केन्द्र प्रदेश नं. २
विपि उद्यान जग्गामा ग्रिन पार्क बनाउने योजना थियो । पहिला पार्क नै नबनाई पार्किङ्ग बनाउनु सही छैन जस्तो लाग्छ । विपि उद्यानको जग्गालाई सदुपयोग गरी आधुनिक वीरगंज बनाउने हाम्रो सोच हो । विकासको लागि वीरगंज महानगरका मेयरले न कुनै मापदण्ड बनाई कार्य गरेको देखिन्छ न त यहाँका अन्य राजनीति प्रतिनिधीले नै । विकासको लागि आवश्यक मापण्ड नै नअपनाउँदा वीरगंज सुन्दर भएर पनि कुरुप छ । महानगरको विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जुन मापदण्ड अपनाईनु पर्ने हो त्यो भएको देखिदैन् । तसर्थः पार्क नै नबनि पार्किङ्ग बन्नुमा मुख्यतः मैले राजनीति क्षमताको अभाव देखेको छु । जुन वीरगंजको लागि विडम्बना हो । वीरगंजमा हजारौंको उपस्थितिमा सभा सम्मेलन गर्न सक्ने कुनै व्यवस्थित ठाउँ नभएकोले नेपाल भारतको सहयोगमा विपि उद्यान जग्गामा नेपाल भारत मैत्री हल पनि बन्ने कुरा थियो । तर गैरराजनितिक व्यक्ति हाबी भईसकेपछि त विकासे बजेट कसरी खर्च हुने हो त्यो त देखिरहेकै छौ नि । तसर्थः गैरराजनितिक व्यक्ति राजनीतिमा हाबी भईसकेपछि कहाँ कहाँ तिरेल भईहाल्छ भन्ने ठेकान छैन् । विपि उद्यान जग्गाको उदेश्य र वीरगंजलाई सुन्दर र आकर्षण बनाउन जसरी विकास निर्माणको कार्यलाई अगाडी बढाईनु पर्ने हो त्यस्तो भएको देखिदैन् । हामीले वीरगंजमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विपि उद्यान होस् भने चाहेका छौ । महानगरको नाममा कर मात्रै उठाएर त हुदैन नी । जनताको हितको लागि उपलब्धी मूलक विकास पनि गर्नु पर्छ नि ।
श्याम पटेल (जिल्ला सचिव)
नेपाली कांग्रेस, पर्सा
वीरगंजमा भरपर्दाै पार्क नभएकोले बाहिरबाट आउने मानिसहरुलाई केही समय बसेर अराम गर्ने ठाउँ पनि छैन् । मान्छे यतिकै अलपत्र हुन्छन् । गर्मीको समयमा झन कठिनाई हुन्छ । विपि प्रयोजनकै लागि विपि उद्यानको जग्गा छ । विपिकै नाममा पार्क पनि बन्नु पर्छ । पार्कको भित्र पनि विभिन्न किसिमको संरचना बन्न सक्छ । पार्क भनेको सकारात्मक पक्ष हो । पार्क नै नबनि पार्किङ्ग बन्नु गलत हो । पार्क बनाएर त्यसको सहुलियतको लागि केही ठाउँ पार्किङ्गको लागि राख्नु ठिक हो । तर ढलान गरेर पार्किङ्ग बनाउनु ठिक होईन । यसमा महानगरको नियत गलत देखियो । ढलान पार्किङ्ग बनाएर पैसा सिध्याउने काम मात्रै देखियो । पहिला पार्क बनाउनु पर्छ अनि मात्र त्यहाँ आउने मानिसको लागि पार्किङ्ग बनाउनु पर्छ । वीरगंज महानगरपालिकाले एउटा गुरु योजना बनाएर पार्कको निर्माण गर्नु पर्छ । पार्क निर्माण भएपछि त्यहाँ व्यापार गर्ने व्यवसायीहरु आफै हटेर जान्छन् । केही काम नभएसम्म अस्थायी रुपमा मानिसहरु व्यापार गर्नु स्वभाविक हो तर दुःखद कुरा के छ भने वीरगंज महानगरका प्रहरीले व्यवसाय संचालन गरेका सबै व्यवसायीसंग पैसा उठाएर व्यवसाय संचालन गराउनु गलत काम हो ।
रामनरेश यादव (अध्यक्ष)
जनता समाजवादी पार्टी, पर्सा
विपि उद्यानको नाममा जग्गा जनाईएको छ । विपि उद्यानको जग्गा वीरगंजको मुटु रहेकोले डिपिआर बनाई राम्रो तरिकाले सौन्दर्यीकरण गरि काठमाडौं जस्तै यहाँ पनि टुडिखेल, सहिद स्मार्क, पार्क बन्ने गरि सायद लालबंगलासम्म वीरगंज महानगरपालिकाले ४ भाग लगाएको छ । पार्किङ्गको लागि त्यो जग्गा उपयुक्त छैन् तर तत्काल खाली रहेको अवस्थामा गाडीहरु रोडमा नलगाई भित्र लगाउने गरि निर्माण भएको होला भन्ने मेरो बुझाई छ । विपि उद्यान जग्गा तरकारी, कपडा वा होटल लगाउने ठाउँ नै होईन । विपि उद्यान जग्गामा टुडि खेल जस्तो सभा सम्मेलन गर्न, भाषण गर्न, सहिदहरुको स्मृति र पार्क बनाउने कार्य नै योजना रहेको छ । त्यसैलाई अगाडी बढाईनु पर्छ ।
प्रभु हजरा (अध्यक्ष)
विपि उद्यान जग्गा पार्कको लागि हो । हामीले १२ विग्हाको यो जग्गा पार्कको लागि लिएको हो । पार्किङ्ग भनेर दाया बाँया केही गर्न मिल्दैन् । किन भने सहरमा जग्गा समान्य रुपमा पाइँदैन् । संयोगले धेरै मेहेन्त गरेर विपि उद्यान जग्गा लिईएको हो । विपि उद्यान पार्कको लागि हो पार्कै बन्नु पर्छ । अरु कुनै चिज त्यहाँ रहनु हुदैन् । महानगरपालिकाका मेयर साहेबले तदारुकताका साथ लाग्नु हुन् । मान्छेलाई खाली पैसा नै चाहिन्छ, कोही तरकारीबाट पैसा उठाई राखे होला, कोही कपडाबाट त कोही होटलबाट । पुरै लथालिङ्ग छ । कुनै मापदण्ड नै छैन् र ठेक्का पट्टा पनि नभएको होला जस्तो लाग्छ । कोईराला हाकिम भएको बेला हामीले नै सबै हटाएर सफा गराएका थिए ।
दिलिप राज कार्की (युवा नेता)
विपि उद्यान ठाउँ भनेको पहिला पार्क बनाउनको लागि हो । पहिला पार्क, अनि पार्किङ्ग बनाउने हो । अहिले विपि उद्यानको जग्गामा गैर कानुनी ढङ्गले फलफूल, तरकारी र कपडा बेच्न दिने, होटल संचालन गर्न दिएर पैसा मात्रै उठानउने काम भएको छ । त्यहाँ पार्क बनाउने गौरवमय जुन योजना छ । वीरगंजलाई व्यवस्थापन गरि सुन्दर, सोभामय बनाउने कार्यलाई अगाडी नबढाएर पार्किङ्ग बनाई कमाउने मात्रै, दोहन गर्ने तर त्यसलाई सदुपयोग गरि निर्माण चाही नगर्ने जस्तो काम भईरहेको छ । जुन गलत हो । पहिला पार्क बनाउनुपर्छ, अनि त्यसपछि व्यवस्थित गर्दै पार्किङ्ग बनाउने हो तर यहाँ पैसा मात्रै उठाउनले उदेश्यले पार्किङ्ग बनाउन लागिएको छ । तसर्थः विपि उद्यानको उदेश्य विपरित पैसा उठाउने कामलाई मात्रै गरिदैछ ।
विजय कुमार सरावगी (मेयर)
विपि पार्क नै बनाउनु छ । त्यसको लागि टिकट काउण्टर, शौचालय र पार्किङ्ग पनि बनाउनै पर्छ । तर अहिले केही मान्छेहरु कुरै नबुझिकन पार्किङ्ग बनायो, संरचना बनायो भनेर हल्ला गरिरहेका छन् । हाम्रा सम्मानित अदालतहरुले पनि संरचना तोड्नको लागि फैसला गरेको होईन, विपि उद्यान जग्गाको उदेश्य अनुसार नै संरचना बनाउन निर्देशन दिएको हो । विपि पार्कको जुन नक्सा बनेको छ, त्यो सहरी विकास मन्त्राललयले नै बनाई दिएको छ । त्यही मास्टर प्लानको हिसाबले नै कामहरु सुरु गरिएको छ । अब यहाँ मेयरले नै विपि जग्गाको उदेश्य अनुसार पार्क लगायतका काम ग¥यो भन्ने हाम्रो राजनीतिक नै बिग्रिन्छ भने सोचले अनावश्यक रुपमा मुद्दा दर्ता गरिदिए । उनीहरुको मुद्दाको कारणले गर्दा २ वर्षमा काम सक्ने जुन टार्गेट थियो, त्यो रोकिएको छ । कुरा नै नबुझिकन अनावश्यक बाँधा अडचन दिने काम नर्गन अनुरोध छ । यस्तै कारणले वीरगंज महानगरभित्र ५०० वेडको अस्पताल बन्न सकेको छैन् । तपाईहरुले नै ल्याएको योजना हो, तपाईहरुको पार्टीको मेयर नहुँदा पनि तपाईहरुकै योजना अनुसार काम गर्न खोज्दा कुरा बुझ्नु पर्छ । अनावश्यक विषयहरु उठाउँदा मैले अहिले विपि उद्यानको कामलाई स्थगित गरेको छु ।
#वीरगंज महानगरपालिका #विपि पार्क #विपि उद्यान #ग्रिन पार्क
सोमवार, भदौ ७, २०७८, १२:०८:००
भदौ ३१, २०७८ बलिराम यादव , सन्ध्या पौडेल